Budata Flight Simulator 3D APK maka Android
Budata Flight Simulator 3D
Budata Flight Simulator 3D,
Jide naka na ị ga -ebili wee daa nke ọma wee rute nọdụ ụgbọ elu oge niile. Site na Flight Simulator 3D, ị nwere ike nwee ohere iji fụọ ọtụtụ nha na ike dị iche iche wee rụọ ọrụ dị ka onye na -anya ụgbọ elu na ụlọ ọrụ kacha ibu nụwa.
Na Flight Simulator 3D, nke bụ ịme anwansị ụgbọ elu, ị nwere ike fega nakụkụ ụzọ nokporo ụzọ mepere emepe nke egwuregwu ahụ, ma ọ bụ ị nwere ike họrọ ụzọ mkpirisi ma ọ bụrụ na-ịchọrọ. Nime egwuregwu ahụ, anyị na -enweta ego site nịrụcha ọrụ dị iche iche na ọnọdụ ihu igwe dị iche iche. Site na ego a anyị nwere ike mepee ụgbọ elu ọhụrụ, gbanwee ọdịdị ụgbọ elu anyị ma melite ụgbọ elu ụgbọ elu anyị.
Enwere ụdị ụgbọ elu iri na anọ dị na egwuregwu ahụ, nke na -eju ndị ọrụ afọ ojuju na eserese na ịdị mma. Nime egwuregwu a ebe ị ga -ahụ ọnọdụ ihu igwe dị iche iche, ụdị ozi dị iche iche na -agbakwunye egwuregwu ahụ obi ụtọ. Bịa, budata egwuregwu a ka ị bụrụ ezigbo onye ọkwọ ụgbọ elu ma mee njem ụgbọ elu!
Flight Simulator 3D bụ egwuregwu ịme anwansị kpamkpam maka ngwaọrụ gam akporo.
Flight Simulator 3D Ụdịdị
Mmepụta: Tap - Free Games